Cajiib! Prof. Xasan Sheekh oo jeex-jeexay warqaddii Farmaajo ee lagu taageeray Fahad Yaasiin | Warbaahinta Ayaamaha
Cajiib! Prof. Xasan Sheekh oo jeex-jeexay warqaddii Farmaajo ee lagu taageeray Fahad Yaasiin
MUQDISHO-AYAAMAHAProf. Xasan Sheekh Cali Nuur ayaa wareysi uu siiyey taleefishinka Somali Cable, waxa uu ku jeex-jeexay warqaddii kasoo baxday Farmaajo, ee uu kaga horyimid shaqo ka-joojinta agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasiin.
“Ra’iisul wasaaraha wuxuu xilka ka qaadi kara wasiir, ee muxuu yahay agaasime,” ayuu yiri Prof. Xasan.
Waxa uu intaas ku daray in Rooble uu go’aanadiisa u cuskaday qodobo dastuuri ah, oo cad oo aanu mugdi ku jirin.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in diida doodda Farmaajo ee ah inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qaranka, wuxuuna sheegay in xilka Fahad uusan aheyn taliye, ee uu yahay agaasime, sidaas darteedna aanu madaxweyne shaqo ku laheyn.
“Xitaa haddii uu ahaan lahaa xil taliye, Farmaajo waa madaxweyne hore, wuxuuna muddo xileedkiisa ku ekaa 7-dii Febraayo, sida ku cad dastuurka muddo xileedka madaxweynaha waa afar sano oo ka billaabata maalinta la dhaariyo,” ayuu yiri Porf. Xasan Sheekh Cali.
“Warqaddan uu soo qoray ra’iisul wasaaraha xil-gaarsiinta waa inay shaqeysaa, warqaddan uu soo qoray Maxamed Cabdullahi Farmaajo-na saas waayey, ku rid qashinka,” ayuu yiri Prof. Xasan Sheekh Cali oo kadibna jeex-jeexay warqaddii Farmaajo.